/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); အ​ေထာက်အကူြပု ကီး​ဘုတ် - Help Keyboard | WaitZar User's Guide /g,'>').replace(/"/g,'"'),data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u1039]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if(data != data_escaped)$(this).replaceWith(data); }); }); //]]>
အ​ေထာက်အကူြပု ကီး​ဘုတ် - Help Keyboard
ဝိဇ္ဇာတွင် စကား​လံုး​တစ်လံုး​ကို ရှာ​ေဖွြကည့်​ရှုရန် အ​ေကာင်ဆံုး​နည်း​လမ်း​မှာ - Help Keyboard ကို သံုး​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ သင်စာရိုက်​ေနချိန်တွင် “F1” ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါက virtual keyboard တစ်ခု​ေပါ်လာပါမည်။ ယခုအချိန်တွင် သင်က ခလုတ်တစ်ခုကို နှိပ်လိုက်သည့်​အခါ ထိုခလုတ်ြဖင့်​ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထား​သည့်​ ြမန်မာစာလံုး​ကို ရိုက်လိုက်သည်နှင့်​ အလား​တူပါမည်။ ကီး​ဘုတ်ကို ြကည့်​ရင်း​ ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ေလ့​ကျင့်​ ြကည့်​ပါစို့​။
…ယခုအချိန် U ခလုတ်ကို နှိပ်လျှင် “က”. ကို ြမင်ရမည်။ (​ေမာက်စ်ကို သံုး​ကာ ြမင်​ေနရသည့်​ ခလုတ်ကို နှိပ်ြခင်း​ ြဖင့်​လည်း​ အသံုး​ြပုနိုင်သည်။) အြပာ​ေရာင်စာလံုး​များ​သည် သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာစာလံုး​များ​ အြဖစ် ​ေြပာင်း​လဲသွား​ပါမည်။ အကယ်၍ “Shift” ခလုတ်ကို နှိပ်ထား​ပါက အနက်​ေရာင်စာလံုး​များ​ အြဖစ် ​ေြပာင်း​လဲ ြမင်​ေတွ့​ရပါမည်။
ထို့​ေြကာင့်​ Shift+U ကိုတွဲရိုက်လျှင် “ဉ ” အက္ခရာကို ရပါမည်။ “က” ကို ရမည် မဟုတ်ပါ။ စကား​လံုး​တစ်လံုး​ကို ရှာ​ေဖွသည့်​အခါ မည်သည့်​ သရ၊​ ပုဒ်ြဖတ်ပုဒ်ရပ် သ​ေကင်္တများ​ကိုမျှ မရိုက်မီ ဗျည်း​အက္ခရာကို ဦး​စွာ ရိုက်ရန်လိုအပ်ပါမည်။ ဥပမာ -ဟူသည့်​ စကား​လံုး​ကို ရိုက်လိုပါက ​ေအာက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း​ ရိုက်ရပါမည်။
ြမန်မာစာလံုး​များ​ : လ း​ေ
တကယ်ရိုက်ရမည့်​ ခလုတ်များ​: va;
ဤ​ေနရာတွင် ဝိဇ္ဇာမှ ကျွန်​ေတာ်တို့​အတွက် စကား​လံုး​ကို သတ်မှတ်​ေပး​မည် ြဖစ်သည်။ ကျွန်​ေတာ်တို့​က “space” ခလုတ်ကို နှိပ်ြပီး​ Sentence Window အတွင်း​သို့​ ထည့်​သွင်း​ရမည် ြဖစ်သည်။
Unicode လက်ကွက်ကို သံုး​ေနသူများ​အတွက် ဤအချက်ကို လွယ်လင့်​တကူ သ​ေဘာ​ေပါက် နား​လည်နိုင်မည် ြဖစ်သည်။ယူနီကုတ်နည်း​ပညာ အဆင့်​ြမင့်​လာသည့်​အတွက် ဝိဇ္ဇာ၏ လက်ကွက်စနစ်တွင် Ctrl+Shift+Key သို့​မဟုတ် Alt+number စသည့်​ ရှုပ်​ေထွး​သည့်​ ခလုတ်တွဲများ​ကို မလိုအပ်​ေတာ့​ေပ။ Shift ခလုတ်တစ်ခုကိုသာ စာလံုး​ အ​ေနအထား​ ​ေြပာင်း​ရန် အသံုး​ြပုထား​ပါသည်။
For example, instead of havinga“stacked” letter for each consonant, just type “`” after the consonant to stack it. So, to look up “waitzar”, we type:
ြမန်မာစာလံုး​များ​ : ဝိ ဇ ဇ (stack)ာ
အမှန်တကယ် ရိုက်ရမည့်​ ခလုတ်များ​ : shift+wdshift+z shift+z ` m
အကယ်၍ စာလံုး​တစ်လံုး​အတွက် အဂင်္လိပ်စာြဖင့်​ ရိုက်မရပါက “Space” ခလုတ်ကို နှိပ်ြပီး​ ၎င်းစာလံုး​ကို ရိုက်နိုင်သည်။ ဤနည်း​မှာ စာလံုး​အသစ်တစ်လံုး​ကို mywords.txt ထဲသို့​ ထည့်​သွင်း​ရန်အတွက် အ​ေကာင်း​ဆံုး​နည်း​ ြဖစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ရန် အခက်အခဲရှိပါက ဝိဇ္ဇာ၏အ​ေထာက်အကူြပု ကီး​ဘုတ် (WaitZar help keyboard) ကို အသံုး​ြပုြပီး​ ရိုက်နိုင်သည်။
ဝိဇ္ဇာ၏အ​ေထာက်အကူြပု ကီး​ဘုတ်ကို သံုး​ရန် မလို​ေတာ့​ပါက “Esc” သို့​မဟုတ် “F1” ခလုတ်ကို နှိပ်ြပီး​ ကွယ်​ေဖျာက်နိုင်သည်။ ကီး​ဘုတ်အတု (virtual keyboard) ၏ ညာဘက်ြခမ်း​ရှိ “Memory List” တွင် ကျွန်​ေတာ်တို့​ ​ေနာက်ဆံုး​ြကည့်​လိုက်သည့်​ စကား​လံုး​များ​ကို သိမ်း​ဆည်း​ထား​သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ လိုအပ်ပါက လျင်ြမန်စွာ ြပန်လည် ရှာ​ေဖွြကည့်​ရှုနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
စာ​ညွှန်း​​။​​ ​။​ Help, Keyboard, ကီး​ဘုတ်, အ​ေထာက်အကူြပု
No Response to "အ​ေထာက်အကူြပု ကီး​ဘုတ် - Help Keyboard"